रामचन्द्र पौडेल देउवासँग निकट बन्दै ! - Jhilko
काठमाडौं । कोइराला परिवारले भावी सभापतिका रुपमा डा.शेखर कोइरालालाई अघि सारेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक समिकरणमा केही परिवर्तन देखिएको छ । कोइराला परिवारले यो निर्णय नगर्दासम्म वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निर्धारित समयमै महाधिबेशन हुनुपर्ने भन्दै लविङमा जुटेका थिए । तर अहिले पौडेलले निर्धारित समयमै १४ औं महाधिबेशन गर्नुपर्ने मुद्धा उठाउन छाडेका छन् । सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलबीच सम्पर्क बाक्लिएको छ ।
गत विहीबार गण्डकी प्रदेशका केही जिल्ला भ्रमणमा निस्कनुअघि सभापति देउवा र पौडेलवीच लामो भेटघाट तथा कुराकानी भएको थियो । उक्त भेटघाट तथा कुराकानीपछि दुवै नेतासँगै निस्के । तर, महामन्त्री शशांक कोइरालालाई भने सहभागी गराएनन् । यसअघि देउवा र पौडेल दुवै जना पुग्ने कार्यक्रममा महामन्त्री कोइरालालाई पनि सँगै लैजाने परम्परा थियो । केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरु स्वतः महाधिबेशन प्रतिनिधि बन्ने र नेवि संघको तदर्थ समिति गठन गर्दा ३२ वर्षे उमेर हद नलगाउने विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र निकै चर्को बिवाद छ । यो निर्णय गर्दा वरिष्ठ नेता पौडेल लगायत १२ जनाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा फरक मत लेखेका थिए । फरक मत लेखे पनि पौडेल भित्री रुपमा यो निर्णयको पक्षमै छन् ।
आफ्नो समूहका धेरैले फरक मत लेखेका कारण समूहको नेता भएका कारण पौडेलले पनि लेखेका हुन् । तर कोइराला परिवारले आगामी महाधिबेशनमा डा. शेखरलाई अघि बढाउने तयारी गरेपछि पौडेलले आशा मारेका छन् । आफ्ना निकटस्थसँग पौडेलले भनेका छन्– ‘१३ औं महाधिबेशनमा पनि कोइराला परिवारले अन्तिम अवस्थामा मात्रै मलाई स्वीकार ग¥यो, पूर्व तयारीको मौका समेत नपाएकोले चुनाव हारेँ । आउँदो महाधिबेशनमा पनि त्यही खेल हुने संभावना देखियो ।’ १४ औं महाधिबेशनमा देउवासँग कसले प्रतिस्पर्धा गर्ने ? भन्ने टुंगो नभएका कारण वरिष्ठ नेता पौडेल कोइराला परिवारसँग असन्तुष्ट बनेका हुन ।
पौडेल र कोइराला परिवारबीच बढेको यो दुरीले तत्कालका लागि कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई केही अप्ठेरो परेको छ । पौडेल समूहसँग ४० र सिटौला समुहसँग दुई जना जिल्ला सभापतिहरु छन् । केन्द्रीय समितिमा रहनेहरु स्वतः महाधिबेशन प्रतिनिधि हुने पुरानो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय केन्द्रीय समितिको बहुमतले गरेपछि ५६ जना जिल्ला सभापतिको नाममा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको थियो । उनीहरुले विज्ञप्तिमा विशेष महाधिबशेन बोलाउने चेतावनी दिएका थिए । तर ५६ मध्ये करिव एक दर्जनले आफूसँग सल्लाह नै नगरी नाम समावेश गरिएको प्रतिक्रिया दिँदै विज्ञप्तिमाथि आपत्ति जनाए । तर पौडेल तथा सिटौला समूहका ४२ जना भने अडिए । ७७ मा ४२ भनेको बहुमत हो । तर जिल्ला सभापति कुनै निर्णायक निकाय नभएकाले बहुमतको अर्थ राख्दैन । अर्थ राखेछ नै भने पनि त्यसलाई टुक्र्याउने तागत सभापति देउवाले राख्छन् । ४२ मध्ये पनि राति राति देउवा कहाँ र विहान तथा दिउसो पौडेलकहाँ पुग्नेहरुको संख्या एक दर्जनभन्दा बढी छ ।
विशेष महाधिबेशन बोलाउने चेतावनीसहित पौडेल–सिटौला समर्थक जिल्ला सभापतिहरुले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको भोलिपल्टै सभापति देउवाले सार्वजनिक रुपमै चुनौति दिँदै भने– ‘तागत छ भने विशेष महाधिबेशन गरेर देखाए भइ हाल्छ, किन हल्ला गर्नु प¥यो ?’ देउवाको यो प्रतिक्रियापछि पौडेल समूहको छुट्टै बैठक बसेको थियो । कृष्ण सिटौला, अर्जुन नरसिंह केसी, गगन थापा लगायतका नेताहरुले विशेष महधिबेशनका लागि हस्ताक्षर संकलन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर पौडेलले मानेनन् । उनको तर्क थियो– ‘मैले धेरैको नाडी छामिसकेको छु, हामी कहाँ आएर हस्ताक्षर गर्ने, त्यही हस्ताक्षर देखाएर देउवासँग पैसा लिने अवस्था आउने मैले देखेको छ । अर्को कुरा अब एक वर्षभित्र महाधिबेशन हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले नै कुरा उठाउने, विशेष महाधिबेशन गर्नुपर्छ भनेर हामीले नै हस्ताक्षर गर्न थाल्ने हो भने गाइजात्रा हुँदैन ?’ पौडेलको यो असहमतिपछि सिटौला समूह ‘सेटव्याक’ भएको छ । सिटौला समूहमा एक जना पनि निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य छैनन् । सिटौला समूहका सबै केन्द्रीय सदस्यहरु सभापति देउवाद्वारा मनोनित हुन । जसलाई देउवाले चाहेको बेला हटाउन सक्छन् । विशेष महाधिबेशनका लागि हस्ताक्षर गर्ना साथ देउवाले आफूहरुलाई हटाइदिने आशंकाका कारण सिटौला समूह पनि पछि हटेको हो । समाचारस्रोतका अनुसार अब बढी कुरा गरे केन्द्रीय सदस्य पदबाट हटाइदिने सन्देश देउवाले अर्जुननरसिंह केसीलाई पठाइसकेका छन् । यो सन्देशपछि नेता केसी केन्द्रीय समितिको बैठकमा जाने सम्भावना कमजोर भएको छ । जसले मनोनित गरेको हो उसैको विरोधमा मतदान गर्ने अधिकार तथा नैतिकता मनोनित केन्द्रीय सदस्यलाई रहँदैन । नेपाली कांग्रेसभित्र विगतमा पनि यस्तो अभ्यास भएको हो ।
केन्द्रीय समितिमा रहनेहरु स्वतः महाधिबेशन हुने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइए पनि मध्यस्थताको बाटो अपनाउन सकिने सभापति देउवाले बताएका छन् । गत आइतबार म्याग्दीमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सभापतिदे देउवाले भने– ‘केन्द्रीय समितिमा रहने साथीहरु स्वतः महाधिबेशन प्रतिनिधि हुने विधानको व्यवस्था पुरानै हो, मैले गरेको होइन, विधानमा यो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि म विगतदेखि नै वडा तहबाटै चुनाव लडेर महाधिबेशन प्रतिनिधि बन्ने गरेको छु, धेरै साथीहरु वडा तहदेखि नै चुनिएर आउने गर्नु भएको छ, वडा तहमा गएर चुनाव लड्न विधानले छेकेको छैन । त्यसैले यसमा बिवाद गर्नु भन्दा जस जसलाई स्वतः महाधिबेशन प्रतिनिधि नबन्ने इच्छा छ, उहाँहरु वडा तहमै चुनाव लड्न गए भइहाल्यो ।’ -समयबद्ध साप्ताहिकबाट
फोहोर फाल्ने ठाउँमा पेस्तोल फेला
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको विकासमा बेलायतले गर्दै आएको सहयोगप्रति धन्यवाद...
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले दिएको जानकारीअनुसार बेपत्ता भएका सुर्खेतको पञ्चकोटी...
बर्दियाको आठवटै स्थानीय तहमा दमकल नहुँदा समस्या भएको छ
सबैतिर तिहारको रौनक छाइरहेका बेला बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका–४ र ५ भने तीन जनाको...